U adeegiddu waa iibinta cusub | Martech Zone
Waxaan ka qayb galay Indianapolis AMA qado halkaas oo Joel Book uu uga hadlay Suuqgeynta Awoodda Mid. Soo bandhigiisu wuxuu ka koobnaa macluumaad aad u tiro badan oo ku saabsan adeegsiga suuq geynta dijitaalka ah si loogu adeego macaamiisha si wax ku ool ah. In kasta oo, ay jireen dhawr waxyaalood oo laga soo qaatay barnaamijka, waxaa jiray mid aniga igu dhegay. Fikradda ah: u adeegiddu waa iibinta cusub. Asal ahaan, fikradda ah caawinta macaamilku waxay ka waxtar badan tahay sida joogtada ah ee loo isku dayo in loo iibiyo iyaga.
Sidee taasi ugu khuseysaa ololeyaasha suuqgeynta emailkaaga? U dir emayl waxtar leh oo u adeega ujeeddo gaar ah macaamiishaada. Waa kuwan tusaalooyin yar:
Xusuusiyeyaasha alaabta: haddii ay khuseyso badeecadaada, u soo dir emayl xusuusin ah macaamiishaada markay ku dhow yihiin inay u baahdaan inay dib u dalbadaan ama u iibsadaan dib u buuxin.
Xusuusinta Baabuurka Dukaameysiga mararka qaarkood, macaamiisha waxay dhigtaan alaabada gaadhigooda iyagoo ujeedkoodu yahay inay iibsadaan, laakiin si fudud ayaa loo kala gooyaa ka hor intaanay dhammayn karin. Emailada gawaarida wax iibsiga ee laga tagay waxay noqon karaan hab edeb leh oo lagu xasuusiyo inay jiraan waxyaabo wali yaala oo u fududeynaya macaamiisha inay si dhaqso leh dib ugu noqdaan oo ay dhameystiraan iibsigooda.
Xusuusin Xusuusin: kuwani waa xusuusin wanaagsan oo guuleysata oo loo soo diro macaamiisha. U dirista, waxaad xasuusineysaa macaamiishaada inay buuxiyaan dib u eegis ku saabsan badeecad ay dhowaan iibsadeen. Si kastaba ha noqotee, dib u eegista wax soo saarka wanaagsan waxay kor u qaadi kartaa kalsoonidaada shirkad waxayna siinaysaa macaamiisha mustaqbalka kalsooni badan oo ku saabsan sheygaaga.
Haddii aadan ku darin emaylladan qayb ka mid ah barnaamijka suuqgeynta emailkaaga, maxaa diidaya? Waxaa loo dejin karaa inay si otomaatig ah u diraan iyada oo ku saleysan habdhaqanka macaamilka waxayna u adeegaan macaamiishaada si wax ku ool ah, iyo sidoo kale inay keenaan dakhli dheeraad ah khadkaaga hoose. Waxay u egtahay dunk slam, sax? Haddii aad u baahan tahay caawimaad ku saabsan hirgelinta noocan ah emayllada ku jira barnaamijkaaga guud ee emaylka, fadlan la xiriir Delivra maanta.
Tusaalooyin kale oo emayl ah maxaad dhihi laheyd u adeeg macaamiisha?
Tags: Gawaarida dukaanka laga tagayemailEmail MarketingXusuusin alaabtatafaariiqda
Waagii Hore, Hadda, iyo Mustaqbalka Suuqgeynta Internetka
CoSchedule: Jadwalka Tifaftirka iyo Daabacaadda Bulshada ee WordPress
Feb 17, 2014 markay ahayd 7:00 PM
Caawinta macaamiisheenu waxay noqon kartaa mid fudud ama waxay noqon kartaa shaqo, iyadoo kuxiran sida aan u arko. Waxaan marwalba ogaaday in caawinta macaamiishaydu tahay ganacsi faa'iido badan leh. maaha kaliya dakhliga, laakiin sidoo kale xagga raasamaalka bulshada sidoo kale.
Oo maalmahan, oo leh xaddiga saxaafadda ee khibradaha macmiil ee xun ay ka helaan warbaahinta bulshada, waxay ka dhigeysaa mid ka macno badan sidii hore si aan ugu adeegno macaamiisheenna si wanaagsan. Marna ma ogaan kartid cidda garaneysa cidda ama yaa noqon kara kanaalka dib u helidda macmiil cusub.